विपी राजमार्गमा एक पुरूषको शव फेला – Everest Dainik – News from Nepal
विपी राजमार्गमा एक पुरूषको शव फेला
बर्दिवास, श्रावण १ । महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवास नगरपालिका–३ गौरीडाँडाका ३६ वर्षीय श्रवण थापा सडकमै मृत फेला परेका छन् । विपी राजमार्ग (बर्दिवास–सिन्धुली–बनेपामार्ग) को बर्दिवास–३ गौरीडाँडाको स्मृतिपार्क नजिकै मङ्गलबार मध्यरातमा थापा मृत फेला परेका हुन् ।
रात्रि नियमित गस्तीमा निस्केको प्रहरीले शव बरामद गरेको हो । घोप्टो परेको अवस्थामा मृत फेला परेका थापाको टाउको पछाडि चोट देखिएको छ । शव नजिकै थापाको प्रदेश–०२–००१प ३०५४ नंको स्कुटर ठिक अवस्थामा र हेलमेट भने फुटेको अवस्थामा फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासका प्रहरी नायब उपरीक्षक निशान थापाले जानकारी दिए ।
प्रहरीले अवस्था यकिन गर्न शव तत्काल बर्दिवास–१४ स्थित शुभस्वस्तिक अस्पताल पुर्याएको थियो । त्यहाँ चिकित्सकले मृत घोषणा गरेपछि शव परीक्षणका लागि अहिले जनकपुर अञ्चल अस्पताल पठाउन लागिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिवासले जनाएको छ । घटना सडक दुघर्टना वा नियोजित नै पनि हुनसक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ । घटनाबारे सुक्ष्म अनुसन्धान थालिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक थापाले बताए। रासस
ट्याग्स: bardibas, mahottari, Sraban thapa
१० वर्षीया छोरी बलात्कार गरेको आरोपमा बावु पक्राउ
लकडाउन कहिलेसम्म ? के भन्छन् सरकारका प्रवक्ता ?
अमेरिकामा ५०० नेपालीमा कोरोनाको आशंका, एकको मृत्यु
चीनले गर्‍यो अमेरिकालाई १ हजार थान भेन्टिलेटर सहयोग
धनगढीका कोरोना संक्रमितः भाउजुमा पोजेटिभ, अन्य परिवारका नेगेटिभ
लकडाउनमा अनौठा सजायः गोली हान्ने आदेशदेखि करोडौं जरिवाना र वर्षौ जेलसम्म !